Nhema Chishanu iri kuuya: akanakisa madhiri neChina! | Linux Vakapindwa muropa
Nhema Chishanu kwave kutanga, mitengo inoputsa iri China
Kwete Marty, nhasi haisi Chishanu. Iyo Black Friday yatora iyo DeLorean, neiyo yayo flux capacitor, kukuunzira iwe zvipiriso zvemangwana zuro rapfuura. Rwendo rwunozokutendera iwe kuti utenge kuwanda kwezvinhu nhasi izvo zviri zvikwanisiro zvechokwadi, pasina kumirira mangwana.
Iwe haufanire kuvatendera vapfuure, izvi mukana uye tenga zvese zvaunoda kuti uzviite wega kana kutarisira zvipo zvemberi izvo zvauri kuzogadzira Kisimusi ino. Ehe, zviite panjodzi yako wega, nekuti zvaunotenga nhasi zvinogona kuchinja ramangwana uye kukuita kuti uchengetedze huwandu hwakanaka hwemari kuitira kuti ramangwana rako pachako riwedzere "kupfuma" ...;)
Muchikamu chino iwe uchaona zvimwe zve mhindu dzakanakisisa kuti iwe unogona kutenga iri China. Kukushongedza nemhando dzese dzezvipo uye zvigadzirwa zvehunyanzvi ...
1 Tekinoroji inobata ichi China
Tekinoroji inobata ichi China
Amazon pfumisa mitengo kune vasingafungidzirwe nhamba paChina ichi pamberi peChishanu Chishanu, kudziisa injini. Heano mamwe emhando yepamusoro zvigadzirwa pamitengo inoshamisa:
Samsung T7 Inotakurika SSD 1TB: Kana iwe uchida yekunze SSD, tora mukana weiyo 35% kupihwa. Iyo inokurumidza kwazvo dhiraivha mukati mawo ekugadzira mabhakuki ako uye kugona kuitakura kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe zvakanaka nekuda kwekureruka kwayo uye kukura kwayo. Uye zvakare ine 1TB yekuchengetedza, uye inomhanyisa kumhanya inosvika ku1050MB / s nekuda kweiyo USB 3.2 Gen2 kubatana. Inoenderana neese anoshanda masisitimu.
WD Zvinhu 4TB: tenga iyi compact yekunze hard drive kusvika -42%. Iyo imwe imwe nzira kune yapfuura, mune ino iri HDD yekunze, iine compact size kuti ugone kuchengeta yako data uye kuitora zvakanaka paunenge uchiida. Iyo inosangana nePC yako, iine chero sisitimu inoshanda, ine USB 3.0 yekukurumidza kuchinjisa. Uye kugona kwayo kunoshamisa, 4TB (4000 GB).
WD Elements Desktop 12TB: iyi yekunze hard drive iri yakaderedzwa ne29%. Kana izvo zvaunoda zviri zvakakura kugona hard drive yedesktop yako kana kuti ubatanidze kune yako Smart TV uye chengeta mafirimu, mapikicha, mimhanzi, kana kurekodha ako aunofarira mashoo, ipapo uchafarira iyi 12TB (12000 GB) mega yekunze hard drive. Mhuka yekuchengetedza yeHDD ine inokurumidza USB 3.0 interface inowirirana nehuwandu hwesimba.
Kingston HyperX Predator 16GB: a 47% kuderedzwa mune RAM ndangariro. Iyo kititi yemaviri ma8GB DDR4 3000Mhz ma module, CL15, DIMM XMP. Iye zvino unogona kuwedzera ndangariro yako uye kuita kuti komputa yako iende nekukurumidza nekuda kwechipo ichi chausingafanire kupotsa ...
Yakakosha Ballistix 16GB: iyi imwe sarudzo kune yapfuura ine 31% kuderedzwa. Mune hunhu yakafanana chaizvo, ine ma module maviri akaisirwa kit ye8GB imwe neimwe, nyora DDR4 3000Mhz, XMP DIMM, CL15 latency, uye neyakavakirwa-mukati yekuparadzira kupisa, sekuKingston, kuitira kuti vasatsva zvakanyanya .
Samsung EVO Sarudza 256GB microSD: a 52% kuderedzwa inofanira kukukurudzira kuti utenge iyi microSD memory kadhi. Iyo ine inokwana 256GB (inokwana maawa gumi nemaviri e12K UHD kurekodha vhidhiyo kana 4 mapikicha), ine yakanakisa kumhanya kune mafoni, makamera, drones, uye mapiritsi. Inotsigira yakakwira kumhanya kurekodha ye75.200K UHD uye Super Slow Motion nekumhanyisa inosvika ku4MB / s (UHS-I U100). Iyo zvakare inoratidzira 3-dura chengetedzo kuchengetedza yako data kubva kuX-ray, magetsi, tembiricha, uye mvura.
Kingston Dhata Mufambi Micro 3.1 128GB: kana iwe uchida pendrive, tenga izvozvi kune a 18% zvishoma. Iyo SuperSpeed ​​3.1 Gen 1 USB ndangariro, ine 128GB yekuyeuka kuti uichengete kana kuti iwe yaunoda uye uitore kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, iine casing casing protection, uye kumhanya kwe100MB / s kuverenga uye 15MB / s ...
ORICO Chiteshi chekumisikidza 5: ikozvino unogona kutenga chiteshi ichi ye20% pasi. Ichi chishandiso chinotendera kubatana kuPc kuburikidza ne USB 3.0 uye inoenderana neWindows, macOS uye GNU / Linux. Iyo ine mashanu slots e5 5 ″ madhiraivha akaomarara ane SATA3.5 yekubatanidza. Inogona kutsigira kusvika 3TB (50x5TB). Yakanakira kugadzira backup makopi uye kuve neyako yakaoma madhiraivha akaisirwa mukati.
Samsung S34J552: Iyi Samsung yemitambo yekutarisa ine 33% kuderedzwa. 34, UltraWide QHD (3440 × 1440), 4ms, 75Hz yekutarisa, rutsigiro rwe AMD FreeSync, VA LED pani, 21: 9 ratio, ine HDMI neDP connector,. Chiitiko chekunyudza chaicho chemitambo kana multimedia, PBP uye PIP mabasa ekuona zvemukati kubva kune maviri akasiyana masosi panguva imwe chete, uye VESA rutsigiro.
ASUS RT-AX58U: a 29% kuderedzwa Ichi chipo chine muto kwazvo kuti uuye neiyi router yemitambo kumba kwako, iyo yaunogona kuve nayo yakanakisa kufukidza uye nekukurumidza kwakanyanya. Zvese kutamba online uye kuita ese marudzi emabasa pamambure. Iyo 802.11ax WiFi router (WiFi 6), ine 160Mhz yebandwidth, yakasanganiswa kumhanya kwe3Gbps (574Mbps ye2.4Ghz uye 2402Mbps ye5Ghz), DualBand, MU-MIMO uye OFDMA tekinoroji yemamwe multichannel, yemahara AiProtection sevhisi yekuchengetedza neTrend Micro yeIoT zvishandiso, AiMesh mesh tekinoroji, QoS, VPN, ina ekunze anodzora maantena, nezvimwe.
ASUS Prime B450-PLUS: iri mamaboard rine 13% kuderedzwa, saka unogona kutsiva yako kana kukwira PC nemari shoma. Iyi mamaboard inoshandisa B450 chipset, iri ATX mhando, iine AM4 socket ye AMD Ryzen 3000 Series processors, ine slots yeDDR4 3200Mhz, M.2 kubatana kweSSD hard drives, SATA3, USB 3.1 Gen 2, nezvimwe.
asus chrome bhuku: a 20% kuderedzwa ndizvo zvine laptop iyi. Iyo ine 14-FullHD (1920 × 1080) skrini, Intel Core i5-10210U 4-core 1.6Ghz processor (4.6Ghz mu turbo mode), ine Intel UHD Graphics yakabatana, 16GB yeLPDDR3 RAM, 512GB yekuchengetera neSSD M .2 NVMe PCIe, uye ChromeOS inoshanda sisitimu (Linux kernel). Iyo inowirirana nezvazvino maapplication eChannelOS neAroid, uye iwe unogona zvakare kushandisa WINE kumhanya Windows software. Uye zvechokwadi, inosanganiswa zvakanyanya neGoogle masevhisi mugore (semuenzaniso: inogadzira otomatiki mabhakiti mugore kuti usarase chero chinhu). Zvichida rimwe remapoka akanakisa evadzidzi ...
ASUS S425MC-R5240G020T: kana chaunoda chiri-off-road desktop, iyi tower ine 11% kuderedzwa. Iyo inouya yakashongedzerwa ne AMD Ryzen 5 2400G 4-core uye 8-tambo processor, yakavharwa pa3.6Ghz base uye inosvika ku3.9Ghz mune turbo modhi, uye yakabatana AMD Radeon RX Vega 11 GPU. Inosanganisira 16GB yeDDR4 RAM, kuchengetedza ine Ultra-inokurumidza 512GB M.2 NVMe PCIe SSD, uye pre-yakaiswa Windows 10 Imba yekushandisa system.
LITTLE X3: tora izvozvi iyi inonakidza yemitambo smartphone yemutengo wakaderera chaizvo nekuda kweiyo 15% kuderedzwa. Iwe unotoziva kuti POCO ndeimwe yemhando dzeiyo hofori Xiaomi, senge Amazfit, Redmi, Mijia, nezvimwe. Inonakidza nhare ine 64MP quad kamera uye AI yekuvandudza mapikicha, 20MP pamberi pekamera, ine simba Qualcomm Snapdragon 732G sere-musimboti processor, 6GB ye RAM, 128GB yemukati memory, 6.67 ″ FullHD + skrini ine zororo reti yekutamba 120Hz, hombe 5160mAh bhatiri. , USB-C, kuchaja nekukurumidza, nezvimwe.
Samsung Galaxy Tab A: hwendefa iri zvakare rine 5% kuderedzwa, iyo pamwe chete nemutengo wayo wezvehupfumi unoita kuti ive yakanaka kutenga izvozvi kuita zveterevhizheni, zororo, zvidzidzo, nezvimwe. Iyo ine hombe 10.1 ″ FullHD (1920 × 1200) yekubata skrini, ine Exynos OctaCore processor ine 2 cores pa1.8Ghz uye 6 pa1.6Ghz, 2GB ye RAM, 32GB yemukati memory (inowedzerwa ne microSD inosvika 512GB), kumashure kamera 8MP uye 5MP kumberi, 7300mAh bhatiri, WiFi + Makaralı, AKG uye Dolby Atmos vatauri vane 3D yakakomberedza ruzha, uye Android 9.0.
Elegoo Yepamberi Kit: iri China uchave uine 38% kuderedzwa mune bhegi rino rine huwandu hwezvinhu kuti utange mapurojekiti ako emagetsi. Zvakanaka kana iwe uchida DIY uye iwe uri muiti wechokwadi. Inosanganisirwa zvikamu makumi matanhatu nenomwe zvakasiyana uye zvinopfuura mazana maviri ezviuru, zvine dzidziso muSpanish uye Elegoo bhodhi iri dombo reArduino UNO (uye inowirirana zvizere). Zvese zvakarongedzwa mubhegi rinoshanda kuitira kuti iwe ugare uine iro padyo uye usarasikirwe nechinhu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Nhema Chishanu kwave kutanga, mitengo inoputsa iri China
Blender 2.91 inosvika nerutsigiro rwekuveza zvipfeko uye zvimwe zvekuvandudza
PulseAudio 14.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo